Abuuritaanka Khariidad Dijitaal Ah oo Loogu Talagalay Ganacsiyada Hore u Socda | Martech Zone
Tan iyo markii uu faafay faafa, waxaan markhaati ka nahay kacdoon dijitaal ah, oo loo weeciyay shaqada fog iyo helitaanka adeegyo badan oo dhijitaal ah abid ka hor - isbeddelkan ayaa u muuqda inuu sii socon doono aafada kadib. Sida laga soo xigtay McKinsey & Shirkadda, waxaan u boodnay shan sano kahor macaamilka iyo korsashada dhijitaalka ah ee ganacsiga dhowr toddobaad gudahood. In ka badan Boqolkiiba 90 dadka fuliya waxay filayaan dhicitaanka COVID-19 in aasaas ahaan loo beddelo qaabka ay u ganacsanayaan shanta sano ee soo socota, iyadoo in badan oo ka mid ah oo tilmaamaya aafada ay saameyn joogto ah ku yeelan doonto dhaqanka iyo baahida macaamiisha. Xaqiiqdii, boqolkiiba 75 macaamiisha qaatay dijitaalka markii ugu horreysay tan iyo markii uu faafay qorshuhu inuu sii wado wixii ka dambeeya COVID-19. Waxay ku biirayaan ciidan sii kordhaya oo ah Macaamiisha kuxiran, kuwaas oo kaliya la falgala noocyada iyada oo loo marayo kanaalka dhijitaalka ah sida bogagga internetka iyo barnaamijyada.
Macaamiisha isku xiran, oo jiilba jiil u fidinaya, waa buunbuunin khibradda guud ee astaanta waxayna la qabsadeen adeegyo khadka toosan ka sarreeya. Macaamiishani waxay isbarbar dhigayaan khibradaha wanaagsan iyo kuwa xun, ee aan toos ula tartameynin wax soo saarka iyo adeegyada. Waxay ku xukumi doonaan waayo-aragnimada Uber tan Amazon, iyo waayo-aragnimada ugu xiisaha badan waxay noqon doontaa rajadooda ugu yar ee soo socota. Cadaadiska ayaa kusii kordhaya shirkadaha si ay feejignaan dheeri ah ugu yeeshaan noocyada ka baxsan booskooda oo ay la jaanqaadaan casriyeynta cusub. Warbixinta HBR waxay xustay sababta koowaad sababta in ka badan kalabar (52 boqolkiiba) ee Fortune 500 la waayey ilaa sanadkii 2000 ay ku guuldareysatay inay gaarto isbedel dijitaal ah. Hubinta kanaallada dhijitaalka ah inay la siman yihiin, ama ka fiican yihiin, tartamayaasha tooska ah iyo kuwa aan tooska ahaynba waxay fure u noqon doonaan koritaan waara.
Kobcinta Safarka Macaamiisha
Deegaanka maanta isku xiran ee hyper-ku-xiran, oo ay weheliso saameynta aafada, ayaa dardar-gelisay rajada macaamiisha ee doorka dijitaalka ay ku dheehan tahay khibradda sumadda jirka. Shirkado badan, safarka macaamiisha khadka tooska ah badanaa waa la jabiyaa oo waa la duugoobaa, maadaama ay si gaar ah ugu adkaatay macaamiisha inay helaan waayo-aragnimo togan marka ay ku howlan yihiin nooc dijitaal ah.
COVID-19 waxay sidoo kale soo bandhigtay qaar ka mid ah dhibcaha xanuunka macmiilka ee dijitaalka ah ee xallin kara. Cunsurrada safarka macaamiisha ee sababay jahwareerka ka hor safka faafa, sida sugitaanka safka iyo bixinta, waa in hadda laga dhigaa mid aan lala xiriirin oo badbaado leh intii suurtagal ah, oo loogu yeero faragelinta dhijitaalka ah. Qiyaasta heer sare ayaa hadda kor u kacday; isbeddelada muddada-dheer ee rajooyinka macaamilka ee isdhexgalka shaqaalaha xaddidan ayaa sii socon doona.
Ururku inuu ku dhaqaaqo isbadal mustaqbalkooda dhijitaalka ah, waa lama huraan in lagu dhaqaaqo xawaare iyo ujeedo, oo laga saaro silo. Suuq geynta, khibrada macaamiisha, daacadnimada iyo howlaha waa inay dhamaantood isku daraan taageerada hadafyada guud. Si loo xaliyo safarka macaamilka ee jabay loona gaaro ujeeddooyinka koritaanka, qof kasta oo ka tirsan ururka waa inuu ku midoobaa aragti guud oo dijitaal ah. Aragtidan waa in markaa loo tarjumaa ficil iyadoo la horumarinayo barnaamijyo dhijitaal ah - halkii laga dhigi lahaa mashaariic dhijitaal ah - iyadoo si aan kala joogsi lahayn diiradda loo saarayo macmiilka. Ururada culeys ka heysto maskaxda mashruucan muddada gaaban iyo kooxaha cabirka leh ayaa sida caadiga ah abuuri doona khibrado macmiil oo aan xiiso laheyn isla markaana miiska uga tagayaan fursado horumarineed oo muhiim ah. Dhinaca kale, ficil ku saabsan aragtida guud ee heer sare ee dhijitaalka ah ayaa keeni doonta soo celin rajo leh. Waxay noqon doontaa shirkadahaas oo leh kooxo isku dhafan - adeegsiga, wax ka barashada, iyo wax ka qabashada fikradaha xogta - kuwaas oo awood u yeelan doona inay dhaqso u dhaqaaqaan mustaqbalna u caddeeyaan.
Sidee urur ku xaqiijin karaa aragtidiisa dijitaalka ah?
Iyadoo maskaxda lagu hayo aragti fog, qeexida istiraatiijiyadeed, qiimeynta shirkadaha balaaran ee guud waa muhiim. Kuwani waxay saameyn ku yeelan karaan kala duwanaanta, qiimaha, tayada, ama isku dheelitirka goobta lagu tartamayo, waana inay ku xirnaadaan aragtida guud ee shirkadda.
In kasta oo ay gaar u tahay safarka shirkad kasta iyo heerka qaan-gaadhka casriga ah ee hadda jira, halkan waxaa ku yaal mabaadi'do muhiim ah oo ganacsi kasta oo ay tahay inuu tixgeliyo inuu si dijitaal ah ugu diyaarsan yahay caadiga cusub:
Waaya-aragnimo fudud, oo xusuus mudan, oo habeysan - U oggolow macaamiisha inay si dhakhso leh oo fudud u sameeyaan waxa ay doonayaan inay sameeyaan
Ka faaidee shaqsiyeynta markasta oo ay macquul tahay - adeegso teknolojiyad si aad ugu adeegto baahida shaqsi ee macaamiisha
Ku dhiirrigeli soo noqnoqoshada iyo wadista daacadnimada - ka faa'iideysiga awoodda xogta si loo fahmo habdhaqanka loona dhiirrigeliyo ficilada
Isku-darka tikniyoolajiyadda jira iyo ka faa'iideysiga awooddooda wadareed - habka kaliya ee koritaanka loo qiyaasi karo waa iyada oo loo marayo nidaam farsamo oo si fiican loo agaasimay oo awood badan leh
Burburi siloos - raadso habab si ula kac ah looga wada shaqeeyo wanaagga weyn
Talada ugu weyn ee ganacsi kasta oo uu ku qaadan karo hawlahan hadda jira waa in la qorsheeyo berri, ma aha maanta. Nooc kasta waa inuu ku dadaalaa oo uu ilaaliyaa khariidad dijitaal ah oo dhammaystiran si loo wado joogtaynta iyo kobaca dakhliga. Haddii dhibaatadu ay wax na bartay, waa inaanay jirin waqti ka fiican oo la qorsheeyo oo loo ikhtiraaco adduunyo sii kordhaya oo dijitaal ah.
Tags: isbeddelmacaamiisha ku xiranCOVID-19khariidadda wadadaaragtida dhijitaalka ah